निताको बिलौना यस्तो, भूलभुलैयाको नयाँ गीत कस्तो ? « Mazzako Online
निताको बिलौना यस्तो, भूलभुलैयाको नयाँ गीत कस्तो ?
मज्जाको अनलाईन, चैत्र ८ गते, आईतबार, २०७१, काठमाण्डौं ।
चैत्र १३ गतेदेखि सार्वजनिक प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र ‘भूलभुलैया’को वियोगान्त गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । भिडियोमा नायिका निता ढुंगानाको रोनाधोना सहितको सम्वाद पनि समेटिएको छ । रजिना रिमालको आवाजमा रहेको ‘माया गर्छौ थाहा छ मलाई’ बोलको यस गीतमा बसन्त सापकोटाको संगीत रहेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको यस गीतमा नायिका निता ढुङ्गाना, नायकद्धय जिवन लुईटेल र शोहित मानान्धर फिचरिङ गरिएका छन् । गीतको कोरियोग्राफी कविराज गहतराजले गरेका हुन् भने यस चलचित्रको छायांकन बाबु श्रेष्ठले गरेका हुन् ।
त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा रहेको चलचित्र भूलभुलैयालाई योगेश घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रलाई दिनेशकुमार पोखरेलले निर्माण गरेका हुन् । दिनेशसँग शुशिल कार्की, शुरेश गौतम र मणीराज कार्कीले निर्माणमा साझेदारी गरेका छन् । चलचत्रिलाई शिवम अधिकारीले लेखेका हुन् ।